China iimilo oluzenzekelayo Imaski umatshini Kn95 imaski Uqoqosho Uqoqosho imaski ukusika umatshini mveliso kunye nabenzi | U-Haojing
Esi silayi sincinci sisixhobo esiphuhliswe sithi ukunciphisa iindleko zothutho. Xa kuthelekiswa nezisiki eziqhelekileyo, incinci ngobukhulu kwaye ihlala kwisithuba esincinci, esinokuthi sinciphise ngokufanelekileyo iindleko zokuhamba zabathengi.
Nangona ubungakanani besixhobo buba buncinci, ukusebenza kwaso kunye nesantya asikho sincinci. Sibeka ushicilelo lwemaski kunye nokusika imela ekubunjeni ukunciphisa ivolumu yezixhobo. Isilayi semaski sinokuvelisa iimaski ezingama-30 ngomzuzu.
Isilayi sixhotyiswe ngesixhobo sokuqokelela inkunkuma. Ngexesha lenkqubo yokuvelisa imaski, kuya kubakho inkunkuma yelaphu. La malaphu anokuqokelelwa ngesixhobo sethu ngaphandle kwengqokelela yemanyuwali, ukunciphisa iindleko zabasebenzi.
Itekhnoloji ye-welding ye-1.Ultrasonic yamkelwe ukwenza iimveliso ezigqityiweyo zicoceke, zisempilweni kwaye zinobuhlobo kokusingqongileyo.
2.Umgca wemveliso uphela uzenzekelayo, usebenza kakuhle kwaye ugcina abasebenzi ukondla, ukufakela umgca wempumlo, ukutywina komphetho kunye nokusika.
Isakhiwo sesakhelo senziwe ngealuminium alloy, umgca wonke uqinile, kulula ukuwucoca, umhle njalo njalo.
Ulawulo lwenkqubo ye-4.Computer PLC, i-servo drive, iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo. Uzinzo oluphezulu kunye nereyithi yokusilela esezantsi.
Ukulawulwa kwempixano ezenzekelayo ye-5.Automatic yempahla ekrwada ukuqinisekisa ibhalansi yoxinzelelo lwezixhobo ezingavuthi.
6.Umatshini ubumbene, umncinci kwaye awuthathi ndawo.
Ubukhulu: 1200mm（L）* 600mm (W) * 1210mm (H)
Iziqwenga ezingama-30-50 / min
Uxinzelelo lomoya ngokubanzi
umoya oshushu ongelukiweyo welaphu
Isetyenziselwa ukubeka ibhulorho yempumlo
Isetyenziswa ikakhulu ukuqala nokumisa izixhobo
Egqithileyo umphetho intloko umtya umaski ukuwelda umatshini umatshini Isikhululo esinye nothango lwaso lobhedu umatshini nisishiye
Okulandelayo: I-china n95 umatshini wokwenza imaski kumatshini wokucheba umatshini
China n95 imaski ukwenza umatshini ubuso Vuvu Machine ...